Nampita ny Hafatr’​Andriamanitra ny Anjely Gabriela | Fiainan’​i Jesosy
NILAZA NY HAHATERAHAN’I JAONA MPANAO BATISA NY ANJELY GABRIELA
NILAZA TAMIN’I MARIA I GABRIELA FA HO TERAKA I JESOSY
Hafatra avy amin’Andriamanitra ny Baiboly manontolo. Nanome azy io ilay Raintsika any an-danitra mba hampianarana antsika. Nisy hafatra lehibe roa nampitainy, 2 000 taona mahery izay. Anjely iray “mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra” no nampitondrainy an’ireo hafatra ireo. Gabriela no anarany. (Lioka 1:19) Inona no zava-nisy tamin’ny fotoana nampitan’ilay anjely an’ireo hafatra miavaka ireo?
Taona 3 T.K. * tamin’izay. Taiza no nampitan’i Gabriela ny hafatra voalohany? Tany amin’ny havoanan’i Jodia, angamba tsy lavitra an’i Jerosalema. Tao no nipetraka i Zakaria, mpisoron’i Jehovah. Efa zokinjokiny izy sy Elizabeta vadiny, ary tsy nanan-janaka. Anjaran’i Zakaria tamin’izay ny nanao ny asan’ny mpisorona tao amin’ny tempolin’i Jehovah tao Jerosalema. Nipoitra tampoka teo akaikin’ny alitaran’ny emboka manitra i Gabriela, raha mbola tao amin’ny tempoly i Zakaria.
Azo antoka fa natahotra i Zakaria. Nampitony azy anefa ilay anjely, ka niteny hoe: “Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoin’Andriamanitra ny fitalahoanao. Koa hiteraka zazalahy aminao i Elizabeta vadinao, ary Jaona no hataonao anarany.” Nilaza koa i Gabriela fa “ho lehibe eo anatrehan’i Jehovah” i Jaona ary “hanomana vahoaka ho an’i Jehovah, eny, vahoaka voaomana.”—Lioka 1:13-17.
Tsy nino anefa i Zakaria, satria efa be taona izy sy Elizabeta. Hoy àry i Gabriela: ‘Noho ny tsy ninoanao ny teniko, dia ho moana ianao ka tsy ho afa-miteny mandra-pahatanterak’izany.’—Lioka 1:20.
Lasa saina ny olona tetỳ ivelany hoe naninona i Zakaria no ela be tao amin’ny tempoly. Nivoaka ihany izy tamin’ny farany, saingy tsy afa-niteny ka nanao fihetsika tamin’ny tanany. Hita hoe nisy zava-mahagaga hitany tao amin’ny tempoly.
Nody i Zakaria rehefa vita ny fanompoany tao amin’ny tempoly. Bevohoka i Elizabeta taoriana kelin’izay. Niandry ny hahaterahany i Elizabeta ary tsy niala tao an-trano nandritra ny dimy volana.
Niseho fanindroany i Gabriela, fa tamin’i Maria, tovovavy mbola tsy nanambady. Tao Nazareta any Galilia, izay any avaratr’i Jerosalema i Maria no nipetraka. Hoy i Gabriela taminy: “Efa nankasitrahan’Andriamanitra ianao. Ary hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy.” Hoy koa i Gabriela: “Ho lehibe izy ka hantsoina hoe Zanaky ny Avo Indrindra ... ary ho mpanjaka eo amin’ny taranak’i Jakoba mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany.”—Lioka 1:30-33.
Azo antoka fa faly erỳ i Gabriela rehefa nomena tombontsoa hampita an’ireo hafatra roa ireo. Ho hitantsika fa tena lehibe ireo hafatra avy any an-danitra ireo, rehefa hianatra bebe kokoa momba an’i Jaona sy Jesosy isika.
^ feh. 2 Ny hoe “T.K.” dia midika hoe “Talohan’i Kristy”, ary ny “A.K.” hoe “Aorian’i Kristy.”
Iza no nampita hafatra roa lehibe avy any an-danitra?
Ho an’iza avy ireo hafatra ireo?
Araka ny hevitrao, nahoana no tsy nampino ireo hafatra ireo?
Hizara Hizara Hafatra Roa avy Amin’​Andriamanitra